The Skin I Live In (2011) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » The Skin I Live In (2011) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ	16
The Skin I Live In (2011) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ
Posted by ဇီဇီ on May 8, 2015 in Entertainment, Movies/TV, Society & Lifestyle | 16 comments
မင်းသားကြီး အန်တိုနီယို Antonio Banderas ပါဝင်တဲ့ ကားပါ။
၂၀၁၁ လောက်က ထွက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ် စကား ပြောမဟုတ်တာမို့ မျက်စိမှောက်ပြီး မကြည့်ဖူးတဲ့ Movie..!!!
မနှစ်က ကံဆိုးစွာနဲ့ လူမင်း နဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ပါတဲ့ ကား အညွှန်း မြင်လို့ ထူးဆန်းတယ် ဆိုပြီး အဲဒီ မြန်မာကားကို ကြည့်မိပါလေရော။
နောင်တတွေ တပွေ့ကြီးနဲ့ ပိတ်လိုက်ရတယ်။
နောက်တော့ ကိုဟိန်း ပေ့(ချ) ကနေ လူမင်းကား က ဒီ ကားကို ကော်ပီလုပ်ထားလို့ ပြောတော့မှ
ဒီ အော်ရီဂျင်နယ် The Skin I Live In ရုပ်ရှင်ကို လိုက်ရှာကြည့်ရတာပါ။
၁၈ အထက် မှ ကြည့်ရတဲ့ ကားမို့ မိသားစုနဲ့ မကြည့်ပါနဲ့။
အလွန်တော်တဲ့ ဆရာဝန် ကြီးက …
တရားခံဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးကို ဖမ်းခေါ် ပြီး …
ရုပ်ပါ ပြောင်းလဲ ပြီး လှောင်ထားရာက စ တဲ့ ပြသနာတွေ ကို ရိုက်ထားတာပါ။
Spanish Movie မို့ ကြည့်ရတာ အဆင်မချောတဲ့ အခန်းဆက် အဖြတ်အတောက် တစ်ချို့ နေရာတွေကလွဲရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကား တစ်ကား ပါ။
Rating 7.6/10 ရထားတာမို့ ညွှန်းမိတာပါ။
အောင် မိုးသူ says: ကြည့်ပီးပီလေ လူမင်းရိုက်တာလည်း ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ မြန်မာပြန်ရိုက်တာမှာ မကြိုက်ပေမယ့် အဲ့ကားထဲက ပိုင်းဖြိုးသုကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တယ်။
ခင်ဇော် says: အဟိဟိ။
မနှစ်က အထိ အန်တိုနီယိုကို ဒီ ကား ရှိမှန်းမသိဘူးးး။
naywoon ni says: ဒါထက်​ စကား အတင်းစပ်​ ဂျိမ်းစ်​ဘွန်းကား​တွေထဲက အဖွားကြီး နာမယ်​က ဘူလဲ​အေ့ ​မေ့​မေ့သွားလို့ ​အောင်​ရဲပုလင်းရဲ့ ​ဒေါ်ဖွား​မေ​တော့မဟုတ်​​လောက်​ပါဘူး ​နော်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: “M” ကို ပြောတာလား??
Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်ရဲ့ Under The Skin ကော ကြည့်ပြီးပြီလား မဂျီး။
ခင်ဇော် says: ဟေ။
အောင် မိုးသူ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 238
ရွှေမိုးတိမ် says: ညီမလေးလည်း ဟိန်း တင်တာတွေ့မှ လိုက်ရှာဝယ်ပြီး ကြည့်ဖြစ်တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: စိတ်အေးလက်အေး ရုပ်ရှင်တကားလောက်ကျိဖို့ အချိန်ဘယ်ကရှာရပါ့။ တရုတ်တန်းသွားရှာရင်ကောင်းမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .၀ယ်ကျိအူးမယ်
Wow says: အိုက်ကားမှာ အန်တိုနီယို သရုပ်ဆောင်တာကြိုက်လို့ရယ် ဇတ်လမ်းကြိုက်လို့ရယ် (၂)ခါတောင်ပြန်ကျိတာ..
ငှက်ကထဂျီးကားကတော့ ကျိတော့ပါဝူး.. ဆဲမိမှာ စိုးလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: နှုတ်ခမ်းနီတောင့်တွေ အများကြီးထုတ်ပြတဲ့အခန်းကတော့…။ ။
ဇာတ်ကောင်ကို သနားတောင် တနားမိတယ်ဂျာ..။ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 517
မောင်ဘလိူင် says: အင်း..အဲ့ကားကြည့်ပြီးပါပြီ။ နောက်မှ ဥရောပ နဲ့ ကနေဒီယန်ဘက်က ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကလေး
Alinsett @ Maung Thura says: လျှာကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကား ရပြန်ပြီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: တွေ့ဖူးပါတယ်မှတ်တာ။
ကက်သရင်းဇီတာဂျုံး နဲ့ တွဲရိုက်တဲ့ ဇောရိုး မင်းသားကိုး။
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ The Mask of Zorro ကား ကို ဗိုက်ကြီး နဲ့ အိမ်တွင်းပုန်း ဘွ တုန်းက ကြည့်လိုက်ရတာ အခါခါ။
. နောက်ပြီး စတားလုံး နဲ့ ကား Assassins မှာလဲ ကြည့်ဖူးတယ်။
. ကြိုက်ခဲ့လား မကြိုက်ခဲ့လား တော့ မသိ။
. မျက်နှာပေး ကတော့ HOT တယ်။ :-))))))
Mr. MarGa says: ​ကျော်​သွားမိတဲ့ ဇာတ်​ကား​တွေ များ​ချေ​ပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.